Fivavahana tao Arabia talohan'ny fivavahana silamo - Wikipedia
Sarin'ny andriamanibavy nabateana, angamba i Al-‘Uzzá
Ny fivavahana tao Arabia talohan'ny fivavahana silamo dia nahitana fivavahana amin' andriamanitra maro (pôliteisma), ny fisafidianana andriamanitra iray amin'ny maro hivavahana (henôteisma), ny fivavahana kristiana, ny jodaisma ary fivavahana iraniana maro. Nisy koa ireo fivavahana hafa izay tsy dia be mpanaraka. Ny akon'ny kolontsaina avy tao amin'ny Empira rômana sy ny Empiran'i Aksoma ary ny Empira sasanida dia hita taratra tao amin'ireo fianakaviambe kristiana tao amin'ny tapany avaratra andrefana sy avaratra atsinanana ary atsimon'ny Saikanosin'i Arabia.
1 Ny pôliteisma sy ny henôteisma arabo
1.1 Ireo andriamanitra telo lehibe
2 Fivavahana hafa tao Arabia
2.1 Fivavahana abrahamika
2.2 Ny fivavahana iraniana
Ny pôliteisma sy ny henôteisma arabo[hanova | hanova ny fango]
Ny pôliteisma sy ny henôteisma no tena nanjaka tamin'ireo fivavahana tao Arabia talohan'ny finoana silamo, ka nisy ny fanompoam-pivavahana natao amin'ny andriamani-dahy sy andriamani-bavy isan-karazany, isan'izany i Humbal sy ny andriamani-bavy zanany telo, dia i al-Lāt sy i Al-‘Uzzá ary i Manāt, izay nanana tempoly tahaka ny Kaaba ao Maka. Ireo andriamanitra ireo dia tokavina amin'ny alalan'ny fombafomba samihafa, ka isan'izany ny fanaovana fivahiniana masina sy ny fisikidiana ary ny fanaovana sorona. Nanjaka ny fanompoana sarivongana (fanompoan-tsampy), ka voalaza fa tao Maka fotsiny dia nahitana sarivongan' andriamanitra hatramin'ny 360.
Ireo andriamanitra telo lehibe[hanova | hanova ny fango]
I Hubal (arabo: هبل) no andriamanitra lehibe indrindra sady rain'ireo andriamani-bavy telo. Ny sarivongan'i Hubal izay vita tamin'ny agata mena sady niendrika olona manana tanana ankavanana volamena, dia nitsangana tao akaikin'ny Kaaba ao amin'ny tanànan'i Maka.
I al-Lāt (arabo: اللات) kosa dia andriamani-bavy nivavahan'ny Arabo tao Maka, izay nanaovany sarivongana vato tao Taif.
I Al-‘Uzzá (arabo: العزى , izay midika hoe "ny mahery indrindra" na "ny hery") dia andriamani-bavin'ny fahavokarana, nivavahana tao Maka koa, izay ninoana fa miaro sady miantoka ny fandresena amin'ny ady ifanaovany amin'ny firenena na foko hafa fahavalony.
I Manāt (arabo: مناة) no andriamanitry ny vintana, izay nanana sarivongana tao akaikin'i al-Mushallal any Qudayd, eo anelanelan'i Medina sy i Maka.
Fivavahana hafa tao Arabia[hanova | hanova ny fango]
Tsy dia nisy fiantraikany firy ny kristianisma, afa-tsy ny firehana nestoriana hita tao avaratra atsinanana sy tao amin'ny Helodrano Persika. Ny endriky ny kristianisma tena nanjaka dia ny miafizisma (na miafizitisma). Ny nestorianisma dia fampiam-pinona ao amin'ny tantaran'ny Kristianisma izay milaza fa misy persona sy natiora roa miara-misy ao amin'i Jesoa Kristy ka ny voalohany persona sy natiora araka an'Andriamanitra fa ny faharoa dia persona sy natioran'olombelona. Ny miafizisma dia fampianrana momba an'i Jesoa Kristy izay milaza fa tokana ny natiora tonga nofon'Andriamanitra Teny.
Ny Saikanosin'i Arabia dia nandray koa ireo Jiosy mpifindra monina hatramin'ny vanimpotoana rômana, izay nampianan'ireo mponina tompon-tany niova ho amin'ny jodaisma.
Ny fivavahana iraniana[hanova | hanova ny fango]
Ny akon'ny kolontsaina avy ao amin'ny Empira sasanida dia vokatry ny fisian'ireo fivavahana iraniana tao amin' ilay saikanosy. Ny zôrôastrisma dia hita tao amin'ny tapany atsinanana sy atsimon'i Arabia. Toraka izany koa ny mazdakisma, ny hita tany koa ny manikeisma.
Ny zôrôastrisma dia fivavahana monoteista manao an'i Ahora Mazda (Ahura Mazda) no anaran’ny andriamaniny sady manindry mafy ny fifanoheran’ny herin’ny tsara amin’ny herin’ny ratsy (doalisma). Ny mazdakisma dia fivavahana gnôstika izay niavaka tamin'ny fananandratana ny fananana iombonana; inoany ny fisian'ny foto-javatra roa: ny Tsara (Fahazavana) sy ny Ratsy (Haizia); ny fifangaroan'ireo foto-javatra ireo tsy nahy no niteraka an'izao rehetra izao. Ny manikeisma dia fivavahana fifangaroan'ny zoroastrisma sy ny bodisma ary ny kristianisma; ny ivon'ny fampianaran'ny manikeisma dia ny fizarany izao rehetra izao ho roa (doalisma), ahitana ny fanjakan'ny Tsara (atao hoe fanjakan'ny Fahazavana) izay anjakan' Andriamanitra, sy ny fanjakan'ny Ratsy (na fanjakan'ny Haizina) izay anjakan'i Satana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_tao_Arabia_talohan%27ny_fivavahana_silamo&oldid=997747"
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2020 amin'ny 08:37 ity pejy ity.